VirBELA: Virtual Nzukọ na 3-Akụkụ | Martech Zone
Nzute remotely dị nnọọ onwe onye na a n'elu ikpo okwu a na-akpọ VirBELA. N'adịghị ka ngwa nzukọ nzukọ vidiyo dị ka Facetime, Zoom, Messenger, Otu Microsoft, Google Meet, nke a dị iche.
VirBELA na-etinye gị na egwuregwu dịka 3-D kampos gburugburu ebe ị na-ezukọ site na ị ga-agagharị na-agwa ibe gị okwu, na-akparịta ụka otu ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnọ ọnụ na anụ ahụ karịa ụwa nke mebere. N'adịghị ka gburugburu egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ Ndụ nke Abụọ, ụwa nke mebere site na VirBELA bụ azụmaahịa-ọkachamara. Ọ na-enye nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọfịs, ụlọ ime ụlọ, ụlọ nzukọ ọgbakọ, ụlọ ezumezu, yana ụlọ ebe ngosi ọgbara ọhụụ na-ewu ewu nke eji ụlọ ngosi ihe ngosi azụmaahịa ezi uche dị na ya.
Emebere oghere a 3-D site na ụlọ ọrụ ụlọ EXp Ezigbo ala dị ka ụzọ iji nweta uru asọmpi karịa ndị na-asọ mpi. Dika ulo oru ndi ozo ndi ozo noro na ulo ndi di oke onu ahia iji nye ndi oru na ndi nnọchi anya ebe ha na aru oru, eXp zoputara otutu ego site na iwepu mkpa acho ahia, oge njem, ugbo agha na otutu nsogbu ndi ozo.
VirBELA bụ teknụzụ na-emebi ihe nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ maara nke ọma na ọgba aghara teknụzụ. Na-arụ ọrụ na-enweghị ezigbo ụlọ, eXp Realty toro site na ịmalite ịmalite inwe ndị ọrụ 29,000. Maka ọtụtụ akụkụ, ndị ọrụ ya, onye isi ala, na ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ site na mma nke ụlọ.
Akwụ ụgwọ ndị ụlọ ọrụ na-ere ala na ụlọ nwere ike ịkwụ ndị ọrụ ha kwụrụ ụgwọ site na nkwụnye ego na agbanwe agbanwe nke azụmaahịa. Ike onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ ha n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-enweghị ịhapụ ụlọ ọ bụghị naanị belata mmefu ego iji bulie ego ndị na-elekọta ego, ọ mere ka ọzụzụ na otu jikọọ ọnụ na ngwa ngwa. A na-azụ ha n'oge na-adịghị anya ma nwekwuo ohere ịbanye na ndị ọrụ na-akwado ya.
Ọbụna na nnọkọ vidiyo, imekọ ihe ọnụ nwere ike ịdị ka ọ na-ekewapụ ndị mmadụ. Ọnọdụ 3-D VirBELA na-enyere aka ịgbanahụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eme ka ọ dị ka ịnọkọ ọnụ n'otu ọnụ ụlọ, ọ chọghịkwa isi ihe VR. Iji akụ na keyboard gị ị ga-ejegharị, zute ndị mmadụ, kwee aka, kparịta ụka, na-agagharị n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ, ọbụnakwa na-emegharị egwu ụfọdụ.
N'ime ọdịdị egwuregwu ahụ, nzube kacha baa uru bụ nke na-arụpụta ihe site na nkwukọrịta ka mma. Conferencelọ nzukọ ogbako, ọnụ ụlọ, ụlọ akwụkwọ, na ọfịs niile nwere nnukwu ihu na mgbidi maka ịkekọrịta ọdịnaya nke ihuenyo gị, weebụsaịtị ọ bụla, nzukọ vidiyo, ma ọ bụ ngwa ọrụ ndị ọzọ. Ihe ị na-enweta bụ ọtụtụ nzọụkwụ ị ga-ezute ihu na ihu.
N’ọtụtụ ụzọ ị na-eme n’ụwa n’ezie, ndị nọ na VirBELA nwere ike iwulite mmekọrịta site n ’ụdị nkwekọrịta ndị mmadụ na - eme ị ga - enwe n’ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-agagharị na mpaghara mgbakọ. Ọ dịka ị na-eguzo n'akụkụ ndị ọzọ, na-ezukọ n'ìgwè. Dị ka avatar nwere ụda oghere ị nwere ike ịnọdụ ala na tebụl ọgbakọ na-ege onye nọ n'aka nri gị ntị aka nri gị, aka ekpe gị na ntị aka ekpe gị na 3-D ọdịyo. Na-atụgharị isi gị legharịa anya n’ime ụlọ ahụ, na-ekwurịtaranụ ibe unu otú unu ga-esi eme ma ọ bụrụ na unu ga-azụ ahịa ọtụtụ kilomita iji nwee ọnụ.
Mgbe iwu a Otu egwuregwu VirBELA maka azụmahịa m, Douglas Karr bụ otu n’ime ndị mbụ batara n’obi iwebata ya. Ebe ọ bụ na mụ na Doug bụ ndị na - ere ahịa dijitalụ na Greenwood, anyị na - asụ otu asụsụ nke ndu ndu, amatakwara m na ya na - ejikwa njikwa ọrụ dijitalụ metụtara ndị ahịa dịpụrụ adịpụ na ndị otu agbasasị. Nkesa ihuenyo na kamera weebụ nwere ọnọdụ ha na usoro nkwukọrịta anyị, ọ bụ ezie na oge ụfọdụ anyị na-ezere igosipụta ihu anyị na-adịghị mma na igwefoto. Iji ma ọ bụ na-enweghị igwefoto, nke a na-enyere gị aka ime ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nọrọ n'otu ọnụ ụlọ ọnụ.
Mgbe ịchọrọ vidiyo iji bulie okwu gị na ọdịdị ihu, VirBELA na-eme ya. Nwere ike ikwu na ọtụtụ ihe mbugharị nwere ike ịme, VirBELA na-emekwa. Ahụmịhe nke ịbanye n'ime ụlọ na ndị ọzọ na-akparịta ụka n'ime ụlọ ahụ bụ otu n'ime akụkụ kachasị pụta ụwa nke ahụmịhe mmekọrịta ọha na eze VirBELA nke na-anọghị na ngwaahịa ndị ọzọ. O nwere ike ịbụ ihe ndabara, mana izu ole na ole mgbe m hụrụ onye nwere Facebook n'ime aha avatar ha na-awagharị n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze VirBELA, Zuckerberg kwupụtara na aha ngwa ọgbakọ ọgbakọ ọhụrụ ha bụ Ozi .lọ.
Ọ bụ ezie na VirBELA nwere ọfịs ndị otu mmadụ, ọ bụ nnukwu oghere dị egwu. Ugbu a, enwere nnukwu ụlọ ngosi Expo nke ejiri ụlọ ngosi ihe ngosi ahia, ebe ezumike na ebe ndị ọzọ.
Zọ kachasị mma iji ghọta ihe VirBELA bụ na ihe ọ ga - emere gị bụ nwalee ya for onwe gị. N'etiti ndị ahịa ahịa dị iche iche nke ụlọ ọrụ gụnyere mahadum dị elu, Fortune 500, mama & Pop ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ndị ahịa dịpụrụ adịpụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọzụzụ (ebe ọ nwekwara klaasị), yana ndị ọrụ ibe / ịkekọrịta ọrụ. Ma ọ bụ VirBELA ma ọ bụ ụfọdụ ngwa ahịa ngwaahịa ndị ọzọ ewepụtabeghị, ekwenyesiri m ike na ohere ị ga-enwe 3-D bụ ntụzịaka nke ọgbakọ na-eso ụzọ.
Mmemme mgbakwunye nke VirBELA na-enye ndị nwe ụlọ ohere ịnata kọmịshọn na ire ahịa ọhụụ ma na-enye coupon maka ịkwụsị ọnwa mbụ. Ọ bụrụ na ị ga-achọ lelee VirBELA, gosi onwe gị na anyị nwere ike izute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ime klas.
Bido na VirBELA n'efu
Ngosipụta: M na-eji njikọ njikọ m maka VirBELA
Tags: 3 akụkụ3dmmemme ahiagamified ahụmahụimikpuVirbelaogbako emere